Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY INTY SY NDAY: Omeo ny vahiny any daholo e !
Rechercher Valider	INTY SY NDAY: Omeo ny vahiny any daholo e !	Imprimer	Fepetra iray azo ambara fa tena fahotana mahafaty ara-politikan’ny fitondrana Hvm noraisdiny tamin’ity herinandro ity tamin’ny alalan’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana ny orin’asam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar ny fanomezana ny vahiny amin’ny alalan’ny vondrom-barotra ara-pitaterana an’habakabaka Air Austral ny 49%-n’ny renivola miasa ao amin’ity orin’asam-pirenena malagasy Air Madagascar ity. Na isan’ny mpifaninana amin’ny orin’asa Air France aza ny Air Austral dia frantsay no tompony. Midika izany fa manamafy ny vahohony eto amin’ny seahtra ara-toekarena ny Frantsay.
Misy ny mpahay momba itony fitaterana an’habakabaka itony no nanipika fa « raha voatery hiditra amin’izany fiaraha-miombona antoka amin’ny vahiny izany amin’io srhatra io dia tsy vahaolana ny Air Austral fa misy orin’asa hafa azo antoka, saingy ny tarigetra aloha dia tokony ho isika malagasy ihany no mitantana sy miantoka ny fampandehanan a an’io Air Mad io fa vitantsika izany fa ny finiavana politikan’ny mpitondra no olana eto ».
Tsy ny fitaterana an’habakabaka ihany no efa nomena ny vahiny, indrindra fa hatramin’ny nanokafana ny habakabak’i Madagasikara (open sky) fa ny sehatra hafa toy ny famokarana herin’aratra koa. Tokony tsy ho tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy fa ny fidiran’ny ameerikana amin’ny Jirama toy ny famokjarana herin’aratra eny Mandroseza na ny fidiran’ny vondrm-barotra vahiny hafa amin’ny famokarana herin’aratra etyo ka mivarotra izany amin’ny Jirama dia efa endriky ny fanomezana ankolaka ny vahiny an’io sehatra io.
Ny orin’asam-pirenena isan-tokony, izay tena iankinan’ny aim-pirenena (secteur stratégique), ankoatry ny Air Mad sy ny Jirama moa dia efa maro ireo nomena ny vahiny, toy ny banky, ny sehatry ny fifandraisan-davitra, ny tontolon’ny solika. Tsy azo hadinoina ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany goavana eto. Nomena ny vahiny koa ny velaran-tany midadasika maro eto, na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Avela hanara-po amin’ny filalaovana ny harena eto, toy ny volamena sy vatosoa sarobidy ny vahiny…
Tsy tokony hataontsika ambanin-javatra fa hatramin’ny fahaefam-panjakana no eo ampelan-tanan’ny vahiny nandritra izay 57 taona izay. Eo aloha ny fangejan’ny fianakaviambe iraisampirenena ny raharaha ankapobeny, ankoatry ny nahateo ambany vahohon’ny fitondram-panjakana frantsay ny firenena malagasy tamin’ny Repoblika voalohany, fa eo dia eo koa ireo vahiny mpanao kolikoly avo lenta eto an-toerana sy mikasa ho avy eto, izay manampina ny mason’ny mpitondra mitana ny fahaefam-panjakana amin’ny alalan’ny klolikoly avo lenta sy tsikombakomba maloto.
Ny olombelona koa, toy ny tovovavy malagasy dia misy no sodoka amin’ny vahiny satria kaikerin’ny fahantrana, hono, dia sahy mivaro-batana etsy sy eroa.
Ny toe-tsaina malagasy moa dia saika safotry ny kolotsaina vahiny ny ampahany maro amin’izao fotoana satria tsy ampy fanabeazana ara-kolotsaina ny tanora mùalagasy ka sodokan’ny avy any ivelany. Ny fanahy mahamalagasy koa dia efa misy no potiky ny avy any ivelany, sy ny maro tsy ho voatanisa e !
Izay mahafantatra ny tantaran’ny « mena hoditra » (peau rouge) tany Amerika dia afaka mampitodika ny fitadidiany amin’ny zava-nitranga tany. Aiza izao sisa ny mena hoditra tompon-tany tany Amerika rehefa lasan’ny vahiny avokoa ny zavatra rehetra ?
Omeo ny vahiny any avokoa ry zalahy dia hiarahantsika mahita syu miaina eto ny vokany an ! Aza hitako ka hiharan’ny fitsaram-bahoaka eo ianareo mpanome vahana ny vahiny ireo, raha sanatriavina ka mitohy izao.